Semalt wuxuu qeexayaa aaladaha waaweyn si loo soo saaro qoraallada laga soo xigtay HTML
HTML tags ( ,,,). Waxaa jira barnaamijyo fara badan oo awood leh oo awood leh oo kaa caawin kara in la soo ururiyo dhammaan noocyada xogta, oo ay ku jiraan qoraallada, sawirrada, iyo isku xirnaanta. Ka sokow, xog kasta oo la soo saaray ayaa loo rogi karaa qaab habaysan oo qaab user-saaxiibtinimo. Intaa waxaa dheer, uma baahnid inaad baratid qawaaniin, sababtoo ah qalabkani waa u fiican yahay qof kasta oo leh xirfad codsi ama khibrad.
1. Import - calcul salaire gratuit ligne.io:
Import.io waa mid ka mid ah qalabka ugu caansan, ugu caansan iyo faa'iido leh oo ka shaqayn kara Habka Soodhiga. Qalabku waa mid caan u ah sababtoo ah interface-user-saaxiibtinimo. Isticmaalka Import.io, waxaad tilmaami kartaa URL-ka, barnaamijkuna wuxuu ku dhajin doonaa oo ku dhejin doonaa macluumaadka adiga. Waxay soo bandhigaysaa mawduuca qaab miiska waxayna la imaaneysaa fursado kala duwan oo horay loo soo dajin ah. Xogta waxaa lagu soo daabici karaa qaabka JSON ama waxaa lagu duubi karaa si qarsoodi ah.
Octoparse waxay ka dhigtaa dhammaan noocyada xogta, waxay abaabushaa qaab qaabaysan oo waxay kaa caawineysaa inaad kala soocdo xogta aan habeysanayn iyo qaabaysan. Waxaad u baahan tahay inaad u sheegto barnaamijka waxa la sameeyo iyo sida loo soo saaro xogta labadaba qoto dheer iyo ballaadh. Waxay qabataa xogta qoraalka ah ee ka kooban xadhkaha. Barnaamijkani ma taageerayo faylasha qoraalka, fiidiyoowga, kumbuyuutarada, iyo sawirada.
Uipath, waa sahlan tahay in la saxo foomka buuxinta, navigalinta, iyo gujinta gujinta, Waa sahal, qunyar, fudud oo shabakad furfuran oo kaa caawinaya soo-ururinta macluumaadka faa'iidooyinka dukumentiyada HTML. waxaad ku kaydin kartaa xogta qaab HTML, JSON, iyo Silverlight. Waxaa intaa dheer, waxaad baran kartaa barnaamijkan si aad u maamusho falalka aadanaha ee dhibaatooyinka kala duwan
Kimono waxa ay la shaqaysaa warfaafinta iyo qiimayaasha, tani waa qalab sax ah oo sare u qaadaya qoraalka dukumiintiga HTML .. Guud ahaan, Kimono ayaa soo jiidi kara foomamka xogta kala duwan
5. Sawir gacmeedka:
Screen Scraper waa qalab kale oo waxtar leh oo wax ku ool ah Wuxu bixin karaa macluumaad nadiif ah oo wanaagsan, iyo sidoo kale wax ka qabashada dhibaatooyinka la xidhiidha nidaamka xogta, Si kastaba ha ahaatee, waxay u baahan tahay xirfadaha barnaamijyada qaarkood si habboon u shaqeeyaan. qiimo yar, iyo nuqul bilaash ah waxay ku yimaadaan tiro xadidan oo kala duwan iyo muuqaalada.
6. Khariidad :
Digniintu waa mid ka mid ah kuwa ugu awoodda badan, dhammeystiran ee ugu fiican ee la isku qurxiyo iyo qaabka wax soo saarka. Waxaa loo isticmaalaa in lagu uruuriyo goobo kala duwan waxaana laga soo saari karaa xogta habeysan iyo mid aan habeysanayn shuruudahaaga. Waxay ka caawisaa kormeerida iyo hubinta tayada xogta, hubinta in aad hesho natiijooyinka ugu fiican ganacsigaaga internetka.
7. Wiiq Wiki:
Sida barnaamijyada kale ee la midka ah, Scraper Wiki waxay la yimaadaan fursado badan. Uma baahnid wax xirfad ah ee codsiga si aad u hesho natiijooyinka ugu wanaagsan ee barnaamijkan. Waad soo saari kartaa boggaga internetka ee caadiga ah laakiin sidoo kale dhamaan Wikipedia oo isticmaalaya Wareega Wiki. Waxay taageertaa PHP, Python, iyo Ruby.
Waxaan rajeyneynaa, waxaad ka heshay wax qiimo leh liiskan, waxaanan kugula talineynaa inaad la wadaagto qalabkan qaboobaha saaxiibadaa.